‘बाबु कान्छा’ मुर्हतमा क-कसले के गरे ? « Ramailo छ
‘बाबु कान्छा’ मुर्हतमा क-कसले के गरे ?
शोभित बस्नेतको लेखन, निर्माण तथा निर्देशन रहने फिल्म ‘बाबु कान्छा’ को शुभ मुर्हत गरिएको छ । छोरा सलोन बस्नेतको मुख्य भूमिका रहने फिल्मको बिहिबार प्रेसमिट गर्दै ‘बाबु कान्छा’ बारे थप जानकारी गराइयो ।
निर्माता, निर्देशक तथा लेखक शोभित बस्नेतले यसै साता देखि ‘बाबु कान्छा’ को छायाँकन सुरु गरिने जानकारी दिए । फिल्मका मुख्य कलाकार सलोनले आफुलाई सबैको माया र आशिर्वाद चाहिने बताए । बिहिबार गरिएको प्रेसमिटमा अभिनेता सरोज खनाल र कलाकार सलोन बस्नेतले मुर्हत सट दिएका थिए । वितरक गोपालकाजी कायस्थ सभापतिको रुपमा थिए ।
मुर्हत सटको निर्देशन नायिका पूजा शर्माले निर्देशन गरेकी थिइन् भने नायक सलिनमान बाँनियाले क्ल्याप हानेका थिए । नायक आमेश भण्डारीले क्यामेरा अन गरे । कार्यक्रमका अतिथि काठमाण्डौं प्रहरी प्रमुख छविलाल जोशीले फिल्मलाई सफलताको शुभकामना दिए ।
‘बाबु कान्छा’ मा सलोन सहित ऋतिक शाही, करिश्मा श्रेष्ठ, निर शाह, सरोज खनाल, राजाराम पौडेल, सम्राट सापकोटा, लय संग्रौला, गीत अधिकारी, सुशान्त श्रेष्ठ र मञ्जु पौडेलको अभिनय रहनेछ । रवि अधकिारी निर्माता रहेको फिल्ममा बाबु श्रेष्ठको छायाँकन, टंक बुढाथोकी र अल्मोडाको संगीत रहनेछ भने कोरियोग्राफी कविराज गहतराजको रहनेछ ।